Uluhlu lwevenkile uXiaomi anayo eSpain | I-Androidsis
IXiaomi yenye yezona zinto zaziwayo kwimarike yaseSpain. Kunyaka ophelileyo, uphawu lwaseTshayina lwafika eSpain ngeevenkile zalo zokuqala. Ngeli xesha, umenzi ebesoloko evula iivenkile kwilizwe liphela, ukongeza kwizivumelwano zokuvala kunye abaqhubi abanjengoYoigo. Okwangoku baba uphawu lwesithathu oluthengisa kakhulu eSpain, kwaye banokukhula nangakumbi.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu lunomdla kwiifowuni zeXiaomi. Ngesi sizathu, kumaxesha amaninzi ufuna ukuya kwenye yeevenkile zorhwebo. Ke ungazibona ngokwakho iimveliso. Nangona ungaqinisekanga ukuba ikho okanye ayikho ivenkile yophawu. Emva koko Sishiya uluhlu olupheleleyo lweevenkile.
ISpain iyeyona ntengiso iphambili yeXiaomi eYurophu. Lelona lizwe apho uninzi lweevenkile luvulekile khona, kwaye kulindeleke ukuba kubekho iindawo ezintsha ezivulekileyo kwiiveki neenyanga ezizayo. Ke ukuzibophelela kophawu eSpain kunamandla. Ngaphambi kokuba wenze umtsi wokutsha Iimarike ezifana neMexico, Ngokuqinisekileyo baya kusishiya neendaba.
Sizahlula iivenkile zibe ngamaphondo, ukuze kube lula kuwe ukufumana eyona ikufutshane nalapho uhlala khona:
1.1 Ivenkile yam iMarineda
2.1 Ivenkile yam iAlmeria Downtown
3.1 Xiaomi Mi Ivenkile yeGran Vía 2 iZiko lokuThengisa
3.2 Ivenkile yam iMachinist
3.3 Ivenkile yam yeGranollers
4.1 Ivenkile yam eGirona
5.1 Ivenkile yam yeZiko laseVevada
6.1 Ivenkile Yam Yokuthenga Indawo Yokuthenga
7.1 Ivenkile yeXiaomi Mi
7.2 Ivenkile yam yokuThengisa iPlenilunio
7.3 Ivenkile yam iPuerta del Sol
7.4 Ivenkile yam yokuthenga ePlaza Norte 2
7.5 Ivenkile yam iLa Gavia Shopping Centre
7.6 Ivenkile yam eLa Vaguada iZiko lokuThengisa
7.7 Ivenkile Yam Xanadú Shopping Centre
8.1 Ivenkile yam iTorre del Mar
8.2 Ivenkile yam yeeVenkile
9.1 Ivenkile yam yeZiko lokuThengwa kweCondomina
10.1 Ivenkile yeXiaomi Mi Ivenkile yokuThengisa yeNervión Plaza
10.2 Ivenkile yam yoLondolozo lweLos Alcores
11.1 Ivenkile yam Reus
12.1 Ivenkile yam iValladolid
13.1 Ivenkile yeXiaomi Mi eRuzafa
14.1 Ivenkile yam Intu Venice Door
Ivenkile yam iMarineda
Idilesi: Indlela yeBaños de Arteixo 43, 15008 A Coruña
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 ekuseni ukuya ku-22: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 981 632 186
Ivenkile yam iAlmeria Downtown
Idilesi: IAvenida Federico García Lorca 49, 04004, Almería
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya ku-13: 30 emva kwemini nango-17: 00 emva kwemini ukuya ku-20: 30 emva kwemini.
Ifowuni: (+ 34) 662 463 992
Xiaomi Mi Ivenkile yeGran Vía 2 iZiko lokuThengisa
Idilesi: IAvenida de la Gran Via 75, 08908, L'Hospitalet de Llobregat
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-9: 30 ekuseni ukuya ku-22: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 931 783 992
Ivenkile yam iMachinist
Idilesi: Isitalato iPotosí, 08030 iBarcelona
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-09: 00 ekuseni ukuya ku-21: 00 ebusuku.
Ivenkile yam yeGranollers
Idilesi: Plaza Josep Maluquer i Salvador 24, 08041 Granollers
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya ku-14: 00 emva kwemini nango-17: 00 emva kwemini ukuya ku-21: 00 emva kwemini.
Ifowuni: (+ 34) 936 539 859
Ivenkile yam eGirona
Idilesi: Umakhulu nge-Jaume I 84, 17001, Girona
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya kutsho ngo-20: 30 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 872 217 615 okanye (+ 34) 635 840 576
Ivenkile yam yeZiko laseVevada
Idilesi: Av .de las palmeras 75, 18100 iArmilla
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya kutsho ngo-22: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 958 724 800
Ivenkile Yam Yokuthenga Indawo Yokuthenga
Idilesi: Av. Eduardo Guitián 13-19, 19002 (Guadalajara)
Ifowuni: 949 382 990
Ivenkile yeXiaomi Mi
Idilesi: IAvenida yaseGreat Britain, S / N, 28916 Leganés
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya kutsho ngo-22: 00 emva kwemini, ngeCawa ngo-11 ukuya ku-00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 915 270 826
Ivenkile yam yokuThengisa iPlenilunio
Idilesi: ICalle Aracne 3, 28022, eMadrid
Ifowuni: (+ 34) 913 776 308
Ivenkile yam iPuerta del Sol
Idilesi: ICalle de Carretas, 5, 28012 (eMadrid)
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-09: 30 kusasa ukuya ku-21: 30 emva kwemini nangeeCawa ukususela ngo-11: 00 ukuya ku-21: 00 emva kwemini.
Ifowuni: (+ 34) 915 138 853
Ivenkile yam yokuthenga ePlaza Norte 2
Idilesi: Plaza del Comercio 11-12, 28703 eSan Sebastián de los Reyes
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya ku-22: 00 emva kwemini nangeeCawa ukususela ngo-11: 00 ukuya ku-21: 00 emva kwemini.
Ifowuni: (+ 34) 910 690 557
Ivenkile yam iLa Gavia Shopping Centre
Idilesi: UCalle Adolfo Bioy Casares 2, 28051 eMadrid
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngeCawa ukususela ngo-10: 00 ekuseni ukuya ku-22: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 918 39 28 11
Ivenkile yam eLa Vaguada iZiko lokuThengisa
Idilesi: IAvenida de Monforte de iLemos 36, 28029 iMadrid
Ifowuni: (+ 34) 910 641 182
Ivenkile Yam Xanadú Shopping Centre
Idilesi: Uhola wendlela u-A-5, uphume ngo-22.Arroyomolinos, 28939 eMadrid
Ifowuni: (+ 34) 916 689 945
Ivenkile yam iTorre del Mar
Idilesi: Calle del Mar 4, Torre del Mar 29740 Veléz
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya ku-14: 00 emva kwemini nango-17: 00 emva kwemini ukuya ku-21: 00 emva kwemini
Ifowuni: (+ 34) 952 636 021
Ivenkile yam yeeVenkile
Idilesi: UCalle Alfonso Ponce de León 3-2, 29140 eMalaga
Shedyuli: Ukususela ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo ngo-10: 00 kusasa ukuya ku-22: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 952 247 301
Ivenkile yam yeZiko lokuThengwa kweCondomina
Idilesi: A-7, Km. 760, 30110 Churra
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 ekuseni ukuya ku-21: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 968 813 812
Ivenkile yeXiaomi Mi Ivenkile yokuThengisa yeNervión Plaza
Idilesi: UCalle Luis de Morales 3, 41005 Seville
Ifowuni: (+ 34) 955 749 176
Ivenkile yam yoLondolozo lweLos Alcores
Idilesi: A-92, 41500 eAlcalá de Guadaíra
Ifowuni: (+ 34) 662 32 69 28
Ivenkile yam Reus
Idilesi: IPlaza Mercadal 5, 43201 Reus
Shedyuli: NgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 ekuseni ukuya ku-20: 30 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 656 491 007
Ivenkile yam iValladolid
Idilesi: Calle Atrio de Santiago 1, 47001 Valladolid
Ivenkile yeXiaomi Mi eRuzafa
Idilesi: IPaseo de Ruzafa 14, 46002 iValencia
Shedyuli: Ukususela ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya kutsho ngo-22: 00 ebusuku, ngeCawa ngo-11: 00 ukuya ku-21: 00 ebusuku.
Ifowuni: (+ 34) 961 814 188
Ivenkile yam Intu Venice Door
Idilesi: I-Travesía Jardines Reales 7, 50021 eZaragoza
Ifowuni: (+ 34) 876 266 956
Zonke ezi ziivenkile uXiaomi anazo ngoku eSpain. Yintoni egqithisile, uphawu lunevenkile eAndorra, enokuba inomdla kuwe, ukuba awukude kakhulu okanye undwendwele. Ulwazi lwevenkile, ebekwe kwikomkhulu laseAndorra, imi ngolu hlobo lulandelayo:
Idilesi: Av. IMeritxell, 41, AD 500, kunye neAndorra La Vella, Andorra.
ShedyuliNgoMvulo ukuya ngoMgqibelo ukususela ngo-10: 00 kusasa ukuya kutsho ngo-20: 30 emva kwemini, ngeCawa ngo-10 ukuya ku-00: 19 emva kwemini.
Ifowuni: + 376 707 373
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Uluhlu lweevenkile zeXiaomi eSpain: Lonke ulwazi malunga nazo
UJuan Andres Mejias Hernandez sitsho
Intombazana yam ithenge iXiaomi redmi 5 Plus ekuqaleni konyaka kwivenkile yeXiaomi kwinxalenye endala yeDonostia. Ivenkile yayineemveliso zeXiaomi kuphela ezivela kwiitheminali ezihambahambayo ukuya kwizithuthuthu ngoobhaka.
Phendula uJuan Andres Mejias Hernandez
Ndivile ngale venkile, kodwa akukho nto malunga nayo ebonakalayo kwiwebhusayithi yeXiaomi, kwaye ayibonakali njengomhambisi osemthethweni, kwaye ndikhangela kwi-Intanethi andifumananga nto! Ke ngoko, ayikho kuluhlu! Enkosi ngokundikhankanya.
Iimoto eziphambeneyo zeRev Heads Rally ezibaleka iarcade
Ngaba i-Galaxy Note 9 imhlophe? Kusemthethweni